B- Lemon Tree Hut - Kufuphi neAuroville - I-Airbnb
B- Lemon Tree Hut - Kufuphi neAuroville
Wamkelekile . Nceda uqaphele ukuba amagumbi okuhlambela nekhitshi zisetyenziswa nangabanye abantu. Inqugwala libekwe kwindawo enkulu egadini. Kukho iindawo ezininzi zokuhlala emthunzini uze wonwabe. Ukuba uyayithanda indalo kwaye unqwenela ukuphumla kunye nomoya omtsha okanye ufuna nje ukutshintsha indawo ngoxa usebenza ukude , uya kuthanda iLemon Tree. 6km ukusuka ePondi Cent kunye ne-4km ukusuka eAuroville, kufutshane neekhefi ezininzi ezithengisa ukutya okumangalisayo. Siyintsapho ethanda izilwanyana zasekhaya sibaleka ekhaya kwaye sabelana ngekhaya lethu kunye nezinja ezi-2 iikati ezi-5 kunye neenkukhu.
Amanqugwala ethu alula kodwa atofotofo. Ngaphandle kwendalo . Banemvakalelo yasemaphandleni. Le ndawo ipholile kwaye ipholile. Ilungele abathandi bendalo.
Sikufutshane neECR eyintloko kunye nomzila webhasi ukuya ePondicherry . Ihotele iHill Hill iphambene ngqo. Ukukhwela ibhayisekile imizuzu eyi-5 kwaye uza kuba kwilali eneevenkile ezininzi kunye neekhefi, kuquka iAuroville Bakery, iTantos yePizza emnandi, kunye neBread and Chocolate . Kukho namachibi okuqubha onokuwasebenzisa ngemali encinci kule lali .
Ngokuqhelekileyo sikwisakhiwo ukuze siphendule nayiphi na imibuzo . Ungasithumelela umyalezo okanye usifowunele ukuba uyafuna xa singekho ekhaya .